Ampidiro ny Voucher, ny tapakila ary ny vahaolana amin'ny kaody fihenam-bidy | Martech Zone
Zoma, Jolay 15, 2016 Alatsinainy, Jolay 18, 2016 Douglas Karr
Ny kaody fihenam-bidy dia fomba tsara indrindra hitaona ny mpitsidika hanidy. Na fihenam-bidy betsaka na fandefasana maimaim-poana fotsiny, ny fihenam-bidy dia mety hahatonga ny fahasamihafana rehetra. Taloha, izahay dia manangana azy ireo amin'ny alàlan'ny endritsoratra barcode ary manara-maso azy ireo amin'ny adiresy mailaka. Tsy nahafinaritra izany… indrindra raha vantany vao ampidirinao ny fahasarotana fanavotana maro, fizarana kaody sns. Ankoatr'izay, niasa tamin'ny Internet ny endritsoratra, saingy tsy maintsy nanangana sarin'izy ireo ho mailaka izahay.
Ny code de voucher, ny fihenam-bidy ary ny tapakila dia matetika no ampijalina, noho izany dia ilaina ny sehatra iray hanarahana azy ireo. Rafitra roa no noresahina tato ho ato forum mailaka Anisan'ny:
iVoucher dia ahafahanao mitantana sy manaparitaka ny kaonty rehetra, kaody tapakila ary fihenam-bidy avy amin'ny sehatra tokana misy fampiantranoana.
Mamorona Voucher - Manamboara voucher manintona nohamboarina ho azy ho an'ny mailaka, tranonkala, sosialy ary finday amin'ny alàlan'ny mpampiasa interface.
Mamoaha Voucher - Mamoaka voucher manerana ny fantsona maro miaraka mba hahatratrarana tratra.
Data angona - Ny data nalaina tamin'ny alàlan'ny pejy fanamarihana marika dia mamela anao hitantana mora foana ny fifandraisan'ny mpanjifa avy ao anaty lampihazo.
Avoty ny Voucher - Avoty amin'ny fomba azo antoka ny tapakila amin'ny fotoana tena izy, an-tserasera sy fivarotana.
tatitra - Ny fahafaha-miasa amin'ny fanaovana tatitra dia midika fa azonao atao ny misambotra sy mitantana ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny taratasinao.
Ho anao izay maniry hamorona vahaolana matanjaka ary hampiditra azy ao anatiny, Voucherify manolotra matanjaka API hiditra, hanarahana ary hanavanana kaody coupon amin'ny loharano rehetra.
Miaraka amin'ny REST API misy azy ireo, ny code dia azo ampidirina anaty tranokala (sisin'ny client JS SDK, Widget checkout voucherify), fampiharana finday (Android sy iOS SDK), na ny back-end (PHP, Ruby, Node.js, Java SDKs, Node .js santionany fampiharana) ny sehatra. SDK matanjaka no misy.
Kitiho raha hanao fampisehoana mivantana:
Makà fanandramana 3 volana maimaim-poana amin'ny Voucherify!
Tags: APIcoupon apicode couponfanavotana tapakilakaody fihenam-bidykaody coupon mailchimpkaody fihenam-bidy mailchimpfanavotanafanavotana voucherrafitra vouchermanamarina
Mivelatra eo amin'ny sehatry ny asa ny Visual Communication
Jul 18, 2016 amin'ny 4: 16 AM
Salama Douglas, misaotra tamin'ny nitanisa anay. Ireo mpamaky Blog MarketingTech dia afaka mahazo kaody promo tsy manam-paharoa amin'ny famandrihana Voucherify 3 volana maimaim-poana eto http://redeem.voucherify.io/marketingtech